Enye yeemvakalelo ezisikhathaza ubomi bam bonke ukwesaba. Kukho iintlobo ezininzi. Ichaphazela zonke iinkalo zobomi bethu. Ngokuqhelekileyo, ukwesaba kuvela ekungazi - oku kuqinisekiswa kuwe nayiphi na isazi sengqondo. Ukwesaba kusithintela ukomoya othuthuzelayo kunye nokulinganisela, ngamanye amaxesha kuya kuba ngumqobo ekufezekiseni iinjongo. Kwaye, ngoko, siqala ukulwa nalo. Ingaba oku kulungile?
Makhe sijonge le ngxaki ukusuka kwelinye icala. Ukuba kwakungekho ukoyika, bekungekho ncamango yokuzimela. Sasihamba ngokuthula ngasendleleni ngaphandle kokujonga. Ukwesaba kukunye kwabaqhubi abakhulu bokuziphatha kwethu. Ukuba sinoyiko lobudala, kufuneka siqale ukuzinyamekela. Into ephambili kukufumana indawo yakho yokwesaba, kwaye ungamniki ithuba lokushiya. Kwaye kukunceda kuloluhlalutyo lwezenzo zakho kunye neengcamango. Le ntliziyo iyaziwayo kuzo zonke izidalwa eziphilayo, kodwa kweli nqaku ndifuna ukugxininisa kwiinkwenkwezi zamabhinqa. Emva kwakho konke, sinyanisekile kwaye sinengqondo, oku kuya kuqinisekiswa yiphina isazi sengqondo. Yaye ukuziva uxhalabo ngokwabo, kwiintsapho zabo kunye nabahlobo babo, basoloko bexhalabisa. Kungakhathaliseki ukuba sasihluke njani, kodwa izizathu zokwesaba esinakho kunye nazo zininzi.
Uloyiko lokuba yedwa
Ngokuqhelekileyo, ukwesaba ukuxhwaba kusishukumisela kwizenzo ezahlukeneyo ezingenangqondo. Uvela ekungazi ikusasa lakhe. Sinobudlelwane nabantu abangathandekiyo, sinyamezela indoda engayithandiyo, kungekhona ukuba yedwa. Kakade, akukho mntu kwihlabathi onokuhlala yedwa ixesha elide. Ukuba iimpawu ezinjalo zikhona, ke le yintsholongwane. Kucacile ukuba kutheni na kubasetyhini kuvela. Kodwa musa ukumnika intando. Ukuba umyeni sele ephuzile emsebenzini, musa ukuzenzela umzobo ukuba ukhona kwenye indawo. Umntu othandekayo uhlawula ingqalelo encinci kuwe, akuthethi ukuba iimvakalelo ziyabanda kwaye unokukuphonsa. Kwaye nangona ungakhange udibene nomlingane wakho, musa ukubeka umnqamlezo ebomini bakho ngaphambi kwesikhathi.
Zithande, thanda nje. Musa ukuhlala kusihlwa kwaye ungazithinteli ngokungathandabuzeki. Kungcono ukubhalisela umdaniso okanye iqela lezempilo, hamba nabahlobo kwibala le midlalo. Unokholo, awukwazi, kodwa sonke sizungezwe ngeendlela ezingabonakali zamandla. Iimvakalelo ezintle ezivela kuthi, ziyinto ekhangeleka ngakumbi ukusijikeleza. Nangona ungabonakali ukungaqiniseki, ukucaphuka, abantu bakho abasondeleyo baya kuvakalelwa. Abayi kukhululeka nawe. Iingcali zengqondo ziyakuqinisekisa ukuba ubomi abapheli xa behlukana. Ufanelwe ngcono kwaye kuya kuza. Yaye oloyiko aluyikwesa uvuyo onalo, fumana kunye nabathandekayo bakho izinto zokuzilibazisa kunye nemisebenzi. Kodwa musa ukulibala ukuba bahambe "bekhululekile", badibana nabahlobo, bajabule iqela lakho elizithandayo.
Uloyiko lokuba ungathandeki
Akunabileyo abafazi, azinakulungiswa kakuhle. Ngenxa yesi sizathu, nasiphi na isazi senzululwazi siya kuqinisekisa ukuba kufuneka uzithande kwaye uzikhathalele ngokucophelela. Kakade ke, akuthethi ukuba kuyimfuneko ukuphinda ulandele imilinganiselo yemigangatho engama-90-60-90, okanye ukuxelisa imizekelo evela kumaphephancwadi aqabileyo. Ibhinqa ngalinye linalo ubuhle, kufuneka uzame ukuyixelela yona.
Amadoda akholelwa ukuba ayamthanda amehlo, kodwa ayenokukhangwa kwizinga eliphezulu ngokuziphatha komntu wesifazane. Kwaye kubonakalisa kwisimo sethu, jonga, ukulinganisa kunye nokuzibonakalisa. Emva kwakho konke, khumbula, abaninzi abafazi abanomlinganiselo obalaseleyo banomdla kakhulu kubantu kwaye baye bazuza kakhulu ebomini. Ukuba uhlushwa ngenxa yokwesaba kokungahambi kwakho, ngoko, ukuzixhalabisa ngezidlo ezintle, ungalibali ukubuyela kumxholo womphefumlo wakho ohlukile.
Ngokuqhelekileyo ukwesaba ukuzala kubangelwa kukungazi inkqubo. Ukususela emlonyeni wabaziwayo, ukuxoxa malunga nenkqubo yokuzalwa komntwana, yonke into itywina ibuhlungu kwaye iyantloni. Yaye ukuba ubukela iifilimu ngokukrokra kunye nokuthuka, umfanekiso ophazamisayo. Kodwa jonga ngeenxa zonke, izigidi zabasetyhini zizalela umntwana wokuqala, kwaye ziqala isibini, yesithathu. Uhlobo lulungelelanisa abafazi, ukuba iintlungu zokuzalwa zililiwe kwiiyure ezimbalwa. Yaye intombazana yakho iyitsho indlela evelele ngayo indlela yakhe yokudlulela kunokuba ingakabuyiselwa kwakhona, kodwa kukunyamezela ngakumbi.
Kungekudala, oogqirha baxhala kakhulu ukuba abafazi ngandlela-thile baphepha ukuzalwa kwemvelo, kwaye bakhokelwa nguloyiko, benza yonke into ukuze bafumane imvume yoqeshwano lwecandelo. Xa wenza isigqibo esinjalo, ungakulibali ukuqwalasela ukuba ngexesha lokunikezela awuyi kuphuka. Kodwa inkqubo yokubuyisela emva kokusebenza iza kuhlala ixesha elide.
Ukoyika ukulahlekelwa ngumsebenzi wakho
Uloyiko luhlukile. Kodwa ukwesaba ukulahlekelwa ngumsebenzi ngowona oqhelekileyo. Oku kuya kuqinisekisa kuwe nasiphi na isazi sezengqondo. Ngako oko, ukwesaba ukulahlekelwa yimisebenzi yabo nokutshintshelwa kwinqanaba labantu ababizwa ngokuba yi-workaholics. Yinto enye ukwenza imisebenzi yabo ngokufanelekileyo. Enye into yokwesaba ukukhangela komsindo womphathi, sebenze kusihlwa, ulandele yonke imisebenzi elandelelanayo. Ngaba uqonda umahluko? Musa ukuhlala uqinisekisa ubungqina bokuba ungcono kwaye ufanelekile indawo yakho. Ukugqithisa kwamanyathelo akho kuya kubangela ukukhathala okungapheliyo nobusuku bokulala.
Unokukrazula ukwesaba ukulahlekelwa ngumsebenzi ngeendlela ezimbini. Zifumane ukhetho lokugcina, okanye ube ngubugcisa kwintsimi yakho. Emva koko uya kukwazi ukuba ngaphandle komsebenzi awuyi kuhlala. Ewe, kwaye ukuba uba njalo, akukho mntu uya kukuncothula kule ndawo. Into ephambili ayiyeki apho. Ukunyuka rhoqo ukwandisa uphuhliso lwakho: iilwimi zokufunda, ukuya kuzo zonke iintlobo zezifundo kunye nokuqeqesha. Ulwazi olongezelelweyo luhlala lunika ithemba.
Ungesabi ukuhamba ngexesha
Ibhinqa kufuneka lenze izinto ezininzi ngosuku. Yondla intsapho, uthenge ukutya, iikhati zensimbi, uye emsebenzini, uthathe abantwana esikolweni. Kwaye oku kuphela ukuqala kwoluhlu. Futhi uvule amehlo akho kusasa, ukhumbule izixhobo zalo, unomzuzwana kwimeko yakho. Endaweni yoko, ukwesaba nokuxhalabisa: kuyenza njani yonke into ngexesha?
Nangona kunjalo, njengoko usuku luqala, ngoko uya kuchitha. Ngoko fundisa ukulawula iimvakalelo zakho. Emva kwakho konke, baya kuthatha kuwe amandla angasetyenziselwa kwizinto zasekhaya nakwezinye izinto. Ukuba uqaphela ukuba uphazamisekile, lungiselela isicwangciso sezenzo zakho ngokuhlwa. Kwaye, ekugqibeleni, kufuneka ukuba bancedise rhoqo phakathi kwamalungu entsapho.
Abanye bacinga ntoni ngam?
Ngokuqhelekileyo, ukwesaba kubangelwa ukuzithoba. Xa abantu bakubheka kwizothutho, zama ukuqonda iimvakalelo zakho. Ndicinga ukuba kwiimeko ezininzi iingcamango ziya kutsalwa: "Ngaba kukho into engalunganga kum?". Kubaluleke kakhulu kuthi kuthi sinomfanekiso omhle kuphela. Ngaloo ndlela, sizama ukukholisa wonke umntu. Kodwa oku akunakwenziwa. Ewe, kwaye, ngokubanzi, abantu abakujikelezileyo abanokuthi kungakhathaliseki ukuba yintoni isimo sakho sezenhlalakahle, nokuba iinqwelo zakho zintle, ingaba le ngubo iyanelisa. Akunandaba ne "I" yakho. Yiba yedwa, kwaye kuya kubakho abantu abayayixabisa.
Ulutsha aluhlali ngonaphakade. Ngoko ke, ininzi yethu, ngokweengcali zengqondo, ngokukhawuleza okanye emva koko siqala ukuziva ukwesaba ukuguga. Eentliziyweni, akukho namnye wethu ofuna ukubeka esi sikhundla. Nsuku zonke sijonge esibukweni size sibone imibimbi emitsha kunye nemilinganiselo yobudala. Kodwa ngaba kufuneka ukhathazeke, kuba eli xesha alibuyanga. Musa ukuchitha ixesha ngexesha lokugubha okungenanto, kodwa qalisa ukuzinyamekela. Abalungisi bee-Hairdressers, i-salon beauty, ezemidlalo, imvakalelo enhle, uthando, jonga-kwiimashumi mane zakho unikwe amabini anesihlanu. Ukufikelela kwiminyaka njengempahla ezisa ubulumko nokuzixabisa. Kwaye ungacingi ukuba ukuguga kuya kuvela unesizungu kunye nokungenakunceda. Bangaphi abantu abadala abakhulisa abazukulu, bafunde iilwimi zangaphandle, ukuhamba, baze bahlele ubomi babo. Khumbula ukuba nakuphi na ubudala, ulonwabo usezandleni zakho.
Uloyiko luhlala lusithatha, njengabasetyhini bentlangano ye-psychic. Ngokuqhelekileyo, ukwesaba kuza ngokungazi, kuya kuqinisekiswa yiphina isazi sengqondo. Ngako oko, kubalulekile ukuqonda ngexesha elibangela ukuba libonwe, kwaye linganiki ithuba lokukuqonda. Ukukuphelisa kuphela ngokuqonda, kodwa akukho nto yokulwa.
Indlela yokulahla umntu wesithathu ubuhlobo
Ngaba ufuna ukuba nomona kwiqabane lakho kwintombi?
Ungakuphepha njani ukungqubana phakathi kwendoda nomfazi?
Indlela yokujonga ibanga eli-10 elincinci: I-Gymnastics ebusweni bombuso (ukusuka kubaqeqeshi abahamba phambili)
Indlela yokuzolalisa umntwana ngaphambi kokulala
Iindidi ezahlukeneyo zeholide zasebusika: i-salads ngexesha
Ukusebenza kwentamo ephumelelayo
Ukubonisa u-Oscar de la Renta kwiVeki yeFebhuwari eNew York
Iingxowa zeSaladi zokuLawula ukuTyeka koMzimba
AmaSandwich nama-meatballs, ushizi kunye anyanisi
Ukunyameka kunye nokunyamekelwa komzimba kwixesha elidlulileyo
Ukuxhatshazwa ngokwesondo okanye umlutha